Dowlada Turkiga oo Fariin Culus loo diray - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Dowlada Turkiga oo Fariin Culus loo diray
Dowlada Turkiga oo Fariin Culus loo diray
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ugu yeeray Turkiga in ay dib u furaan “wadahadaladii ku saabsanaa Bariga Mediterranean.
Macron oo Bartiisa Twitter-ka ku yiri “waxaan fariin cad ugu dirnay Turkiga si dib aanu ugu furno wada hadaladii Giriiga iyo Turkiga”.
Turkiga ayaa Jimcihii ku eedeeyay Macron inuu Shidaal Daar ku daray dabka bariga Mediterranean-ka, ayna adkeysay xalinta dhibaatooyinka.
Wasiirka Difaaca Turkiga Hulusi Akar oo wareysi gaar ah siiyay Channel 4 News ayaa sheegay in madaxweynaha Faransiiska Macron uu isku dayayo inuu door ku yeesho bariga Mediterranean si loo cadeeyo dhibaatooyinkiisa Faransiiska.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in Turkiga uu difaacayo xuquuqdiisa iyo danahiisa, isagoo xusuusiyay inuu leeyahay ku-dhawaad ​​2,000 oo kiiloomitir oo xeeb ah Bariga Dhexe.
Marka la eego aragtida midowga Yurub ee arinta, Akar wuxuu sheegay in midowga yurub uusan wax ku darsanayn xalka oo noqday ismariwaaga
Wuxuu yiri “ Midowga Yurub ma lahan wax awood ay Ku dejiso ama ku badasho xeerkaan ku sameysan xuduudaha bariga Mediterranean.
Si loo yareeyo xiisadaha, Turkiga wuxuu ku baaqay wadahadal si loo hubiyo in si caddaalad ah loo wadaago kheyraadka gobolka.
Dhanka kale, wufuudda militariga ee Turkiga iyo Griiga ah ayaa shirar farsamo ku yeeshay xarunta dhexe ee NATO ee magaalada Brussels si ay uga wada hadlaan qaababka loo yareeyn karo halista dhacdo, iyadoo ay sii kordheyso xiisadaha ka taagan Bariga Dhexe.
Previous articleMareykanka oo ka saari doona suuqa laga soo degsado TikTok caawa
Next article9 Qof oo Wali Baadi Goob Loogu Jiro Dalka Lubnaan